Safarkii Nabadaynta: Kulankii Badhasaabka, Haweenka iyo CaweyskiiSuugaanta. Qormada 5aad. W/Q Siciid Gahayr. – somalilandtoday.com
Safarkii Nabadaynta: Kulankii Badhasaabka, Haweenka iyo CaweyskiiSuugaanta. Qormada 5aad. W/Q Siciid Gahayr.
sans-serif; text-align: justify;”> Habeennimadii 29ka Mey 2018ka waxa aanu is-xog waraysannay waayeelka Gobolka Sanaag gaar ahaanna beel ka mid ah bulshada Sanaag. Odayaashu waxa ay noo qeexeen sida ay mar walba ugu heellan yihiin in waanwaan arrinka lagu dhammeeyo. Waxa ay muujiyeen sida ay mar walba uga shaqaynayaan in arrinka nabad lagu dabbaalo. Isla habeennimadaas ayuu Abwaan Cabdiraxmaan Abees waraysi gaar ah siiyay Idaacadda VOA, waxaanu ku xusay ujeeddada safarka aanu ku joogno Sanaag. Dhambaalkaasi waxa uu ahaa kansho kale oo aanu safarkayaga ku maqashiinno dhego badan kuna faafinno ergada nabadda.
Intaas kaddibna, isla habeenkaas taariikhdu ku suntanayd 31ka Mey 2018ka waxa aannu kulan gaar ah Hudheelka Cadami kula yeelannay Badhasaabka Gobolka Sanaag. Guddoomiyuhu waxa uu nagu soo booqday baradii aanu ka degganayn Ceerigaabo. Waxa uu nooga warramay xaaladaha ku gedaaman gobolka guud ahaan. Xog-ogaal xilkas ah oo war badan haya ayuu ahaa. Masuul ay maaraynta hawshu ka go’an tahay ayuu ahaa.